नयाँ बर्ष २०७८ को शुभकामना! यो सालमा राशि अनुसार तपाईंको भाग्य कस्तो हुन्छ? (विस्तृतमा हेर्नुस्) – चितवन मिडिया
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) यस वर्ष ग्रहगोचर राम्रो छ । वर्षभरि नवौँको मालिक गुरु एकादश स्थान रहने हुँदा प्रशस्त आम्दानी हुने योग छ । दशौँमा स्वगृही बलशाली रहेका शनी एकादशेश भएको र शनि जगलग्नदेखि भएको हुँदा आर्थिक एवं बौध्दिक मार्ग उच्च रहनेछ । आँटेका कामहरू धेरै सफल हुनेछन् । नयाँ कामको आरम्भ हुनेछ । अरूको विश्वास जितेर वैदेशिक व्यापारमा सफलता र कूटनीतिक कार्यमा विशेष लाभ मिल्नेछ । भाग्य बलियो हुनाले धार्मिक र सामाजिक कार्यमा सफलता, सम्मान सोचेभन्दा बढी मिल्नेछ । नयाँ प्रेममा प्रवेश एवं प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने, प्रेमविहीन अविवाहितहरूलाई विवाह बन्धनमा जोडिने अवसर मिल्नेछ । विवाहितहरूका लागि पुत्रलाभको अवसर प्राप्त हुनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी शिक्षामा छात्रवृत्तिसहितको उच्च शिक्षा प्राप्त हुने बलियो सम्भावना छ ।
बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) समग्रमा यस वर्षको ग्रह गोचर मध्यम रहनेछ । एकल राजयोग भएको शनिको भाग्यभावमा हुँदा भाग्यलाई चम्काउनेछ । धार्मिक क्षेत्रमा रुचि बढ्नुको साथै सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुँदा सफलता मिल्नेछ । कर्मेश र भाग्य शनिबाट बनेको एकल राजयोगको प्रभावले आफ्नो वर्चस्व सर्वत्र फैलाउन सकिनेछ । शनिको एकादश दृष्टिले धन मनग्य कमाउने अवसर मिल्नेछ । दशम बृहस्पतिको प्रभाव केन्द्रादि दोष रहँदा फलदायी नरहे पनि द्वितीय र चतुर्थमा दृष्टि भएकाले नयाँ गृहमा प्रवेश गर्ने, नयाँ सवारी लाभ हुने बलियो सम्भावना छ । सक्रिय राजनीतिमा सफताको सम्भावना छैन । कूटनीतिक सफलता आंशिक लाभ हुनेछ। पढाइमा सफलता मिल्नका लागि यस वर्ष निकै परिश्रम गर्नुपर्ने छ । आयेश, कर्मस्थानमा भाग्येश र कर्मेशको एकल राजयोग भने बलशाली रहनेछ । सहयोगी, दाजुभाइ तथा पिताका बीचका सम्बन्धमा केही ह्रास आएपनि धैर्य गरेमा सफताको मार्गमा बाधा आउने छैन । राशिको राहु र सप्तम केतुको प्रतिकूलताले विदेशयात्रामा कठिनाइ आउन सक्छ
मिथुन(का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) वर्षारम्भमा अढैया शनिको र बाह्रौ मंगलको प्रतिकूलताले स्वास्थमा बाधा आउने, काम बिग्रने योग भएपनि यस वर्ष गुरु अनुकूल हुने हुँदा भाग्यले पूर्णसाथ दिनेछ । धार्मिक कार्यमा सम्मानका साथै सामाजिक क्षेत्रमा प्रशंसा पाउने योग छ । बौध्दिक कार्यमा सबैलाई समेट्दै अघि बढ्ने अवसर मिल्नेछ । पढाइमा सफलता सोचे जस्तै मिल्नेछ । पुत्रलाभको अवसर प्राप्त होला । छात्रवृद्धि प्राप्त गरी परदेश पढ्न जान मिल्ने सम्भावना उत्तिकै छ । व्यापारमा लाभ हुनुको साथै वैदेशिक कार्यमा अपेक्षित सुधार आउनेछ । पतिपत्नीबीचको सम्बन्धमा उल्लेखनीय सुधार आउनेछ । परिवारमा सकारात्मक सम्बन्ध बन्ने तथा नोकरीमा प्रगति, उन्नतिको साथै राजनीतिमा कूटनैतिक सहयोग प्राप्तभई ठूलै फड्को मार्ने अवसर मिल्नेछ । आर्थिक लाभ प्रशस्त मात्रामा गर्न सकिनेछ । महत्वपूर्ण कामहरू अघि बढाउन उचित हुनेछ । आश्विन १४ देखि कार्तिक २३ सम्म राजनीतिमा लाग्नेहरूका लागि कूटनैतिक असफलताले पदच्यूत गराउन सक्छन् । व्यापारमा र वैदेशिक कार्यमा अवरोध आउनेछ । भाग्य भावको शनि अष्टम अढैया शनिको प्रभावले आर्थिक संकट बढाउनेछ ।
कर्कट(ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) भाग्येश वर्षारम्भमा अष्टम भावमा रहेका गुरुले स्वास्थ्यमा बाधा, शत्रु वृद्धि, काममा अवरोध आउन सक्छ । पढाइमा विघ्न आउने, सन्तानसँग विमति, लेखनमार्गमा बाधा आउन सक्ने सम्भावना छ। राहुको प्रतिकूल प्रभाव वर्षभरी रहने हुँदा नोकरीमा संकट आउने, राजनीतिमा पाएको सुखसुविधा गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आर्थिक संकट बढाउनेछ । धार्मिक र सामाजिक कार्यमा झुट्टा आरोपको सामना गर्नुपर्नेछ । उच्च रक्तस्रावसहित मुटु, मस्तिकमा पीडा, हाडजोर्नीको समस्या आउनेछ । नगद कारोबार गरे विवाद बढेर मुद्दामामला लाग्न सक्छ । विश्वासमा धोका हुनेछ । परिवारले साथ नदिने मित्रहरू पनि स्वार्थमा प्रेरित भई आफूलाई फसाउन सक्रिय हुनेछन् । पति, पत्नीबीचको विवादमा संयम नभए विछोडको स्थिति आउनेछ । पिता, पुत्रबीच सम्बन्ध बिग्रनाले घरझगडा निकै बढ्नेछ । नोकरीमा झुट्टाआरोप लागेर अप्ठ्यारो पर्नसक्ने, स्थनान्तरण हुने र छुट्ने योग छ । आम्दानीको मार्ग सबै बन्द हुनेछन् । आश्विन १४ देखि कार्तिक २३ सम्म शनिको बृहस्पति सप्तम निचभङ्ग राजयोग हुने हुँदा आम्दानीका अवसरहरू प्रशस्त मात्रामा मिल्नेछन् ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) यस वर्ष ग्रहले पूर्ण साथ दिनेछ । आँटेका काममा सफलता सजिलै मिल्नेछ । बौद्धिक कार्य र पढाईमा सफलता मिल्नेछ । लेखन कार्यमा तीब्रता आउनेछ । साहित्य, कला, गीत, सङ्गीतमा हुनेहरूका लागि अति उत्तम रहनेछ । शैक्षिक उन्नति राम्रो छ । छात्रवृत्ति प्राप्त हुने योग छ । व्यावसायिक यात्रामा संलग्न हुने सम्भावना छ । विदेशिएर भुलेका मित्रहरूले पुनः सम्झना गर्नेछन् । आयात निर्यातमा लाग्नेहरूका लागि अनुकूल रहनेछ । कूटनीतिक कार्यमा लग्नेहरूका लागि अति उत्तम रहनेछ । आम्दानीको अवसरहरू प्रसस्त मिल्नेछ । मित्रता प्रेममा बदलिने, प्रेम वैवाहिक यात्रातिर लम्कने समय छ । पतिपत्नीबीच सुमधुर सम्बन्ध निर्माण हुनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) वर्षारम्भमा चतुर्थेश र सप्तमेश गुरु षष्ट स्थानमा प्रतिकूल भई बसेकाले घरेलु समस्या निकै बढ्नेछ । मित्र तथा परिवारहरूको असहयोगले दैनिकीमा अप्ठ्याराहरू प्रसस्तै आउनेछन् । बाहनले पटकपटक धोका दिनेछ । शत्रुसँग मिलेर परिवार र मित्रले फसाउने प्रयत्न गर्नेछन् । स्वास्थमा अनेक पीडा र विशेषतः पेटमा समस्या आउनेछ । विनाकारणको विवादले सामाजिक कार्यमा भएको प्रतिष्ठा धुमलिने सम्भावना छ । कामको बीचमा अवरोध आउने, सहयोगीहरूबाट धोका हुने, दाजुभाइहरूले सहयोग नगर्ने हुँदा सानो कामलाई पनि धेरै प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । परिवारिक समस्या र मित्रहरूको सहयोगमा व्यस्त हुँदा पढाईमा बाधा आउने, बौद्धिक कार्यमा बाधा आउनाले मन भरङ्ग हुनेछ । सन्तानसँग विमति, लेखनमार्गमा बाधा आउनेछ, शत्रु सक्रिय हुनेछन् । प्रेममा खटपट आउने, पतिपत्नीबीच बढ्ने विमतिले निकै दुःखी बनाउनेछ।
तुला(रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) समग्रमा तुला राशिलाई यो वर्ष मध्यम रहनेछ । अढैया शनि र अष्टम राहुको प्रभावले घरेलुसमस्या आइरहेनछ । परिवारको असहयोग र मित्रहरूको धोकाले मन अशान्त रहनेछ । लेनदेनमा विवाद बढ्नेछ । सवारीसाधानले धोका दिनेछ । मिर्गौला रोगले सताउन सक्छ । हाडजोर्नी र नसाको समस्या आउन सक्नेछ । आश्नि १४देखि कार्तिक २३ गतेसम्म समय निकै प्रतिकूल रहने हुँदा धेरै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने भएपनि वर्षारम्भदेखि वर्षभरी पञ्चम बृहस्पतिको प्रवेशले अति महत्वपूर्ण हुनेछ । ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुनेछ । नयाँ घर, नयाँ सवारी जोड्ने अवसर पनि मिल्नेछ । समाजमा तपाई र तपाईका शब्दले अरूको मन सजिलै जित्न सकिनेछ । भाग्यभाव, आयभाव राशिमा गुरुको दृष्टि रहने हुँदा न्यायक्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि यो वर्ष निकै अनुकूल रहनेछ । विद्यार्थीहरूले अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गरी स्वदेश तथा विदेशमा प्रस्थान गर्ने अवसर मिल्नेछ । व्यापारमा राम्रो उन्नति भई धन आर्जनका अवसर प्राप्त हुनेछन् । नयाँ प्रेम हुने, पुरानो प्रेमले वैवाहिक मार्ग प्राप्त गर्ने योग छ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) वर्षारम्भमा ग्रह गोचर राम्रो रहनेछ । सानातिना समस्या आए पनि समग्रमा सफलता धेरै पाउने वर्ष छ । पराक्रम बढ्नुका साथै अधुरा काम बन्ने, नयाँ काम पाउने योग बलियो छ । सहयोगीहरूका सहयोग पर्याप्त मात्रामा मिल्नेछ । दजुभाइबाट पूर्ण सहयोग मिल्नेछ । बोलीको प्रभाव राम्रो हुनुको साथै अरूको विश्वास सजिलै जित्ने अवसर मिल्नेछ । कूटनीतिक कार्यमा महत्वपूर्ण सफलता पाइनेछ । पढ्नका लागि विदेश वा स्वदेशमा छात्रवृत्ति प्राप्त हुने योग छ । घर, जग्गा तथा सवारी साधन जोड्ने अवसर मिल्नेछ । सन्तान नहुनेका लागि सन्तान प्राप्ति हुने बलियो सम्भावना छ, भएका सन्तानहरूको तीव्र प्रगति हुने योग छ । व्यापारमा र वैदेशिक कार्यमा उचित लाभ उठाउन सकिनेछ । प्रेम गर्ने अवसर मिल्नेछ । वैवाहिक सम्वन्धमा वाँधिने योग बलियो छ । भाग्य बलियो भएकाले सामाजिक कार्यमा उचित सम्मान पाउने योग छ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) यस वर्ष ग्रहगोचर समग्रमा राम्रो रहनेछ । गुरुको अनुकूलताले बोलीको पराक्रम बढ्ने, अरूको विश्वास जितेर महत्वपूर्ण कामहरू प्राप्त गरी सफल बनाउन सकिनेछ । मानसम्मान पाउने योग छ । मित्र तथा परिवारले कुरा बुझेर सहयोग गर्नेछन् । घर तथा सवारी साधन जोड्ने अवसर मिल्नेछ । नयाँ मित्रको आगमन हुने, परिवारको सदस्य संख्या वृद्धि हुने सम्भावना छ । सन्तानबाट सहयोग र सद्भाव मिल्नेछ । नोकारीमा पदोन्नति र राजनीतिमा प्रगति हुने बलियो सम्भावना छ । राहु तथा वर्षारम्भमा राहु, मंगलसमेत अनुकूल हुनाले सानो प्रयासले ठूलो काममा सफलता पाउन गाह्रो छैन । धन भण्डारणमा शनिको वास रहेकोले धन सञ्चित हुन गाह्रो छ । शत्रु वृद्धि हुनुको साथै स्वास्थ्यमा बाधा आउनेछ । आर्थिक कारोवारमा विवाद बढ्नुको साथै लेनदेनमा समेत धेरै विवाद बढ्नेछ । सहयोगीहरूबाट सहयोगभन्दा बढी अवरोध हुने, दाजुभाइबीच द्वन्द्व हुने, पारिवारिक कलह बढ्ने सम्भावना रहन्छ । अकस्मात् प्रेम हुनाले खुशी बढ्ने, मन शान्त हुनेछ । पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध निकै राम्रो हुनेछ। व्यापारमा धेरै अपेक्षित सुधार आउनेछ ।
मकर(भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) साढेसातीको प्रभाव वर्षभरी नै रहनेछ । गुरुको अनुकूल प्रभाव वर्षभरी रहने हुँदा बोलीको प्रभाव राम्रो रहने अरूको विश्वास लिन सकिने योग छ । धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्नेछ । सामाजिक कार्यमा सम्मान पाउनुहोला । पञ्चम राहु रहे पनि राहुको एकादश दृष्टि रहने, कर्मस्थानमा गुरुको दृष्टि रहने हुनाले आम्दानीका अवसरहरू प्रसस्तै मिल्ने छन्। सन्तानसँगको सम्बन्ध र पढाईको क्षेत्र यो वर्ष प्रतिकूल रहनेछ । शान्त मन र मिजासका कारण आफन्तहरूबाट धेरै लाभ मिल्नेछ । शत्रुबाट भने आक्रमित हुनु पर्नेछ । आश्विन १४ देखि कार्तिक २३ सम्म समय निकै प्रतिकूल रहने हुँदा धार्मिक पक्षमा मन नजाने, झुट्टा मुद्दामामलामा फस्ने सम्भावना छ । उच्च रक्तचाव बढ्नुको साथै मुटुमस्तिष्कमा पीडा हुन सक्छ । धनमाल हराउनुको साथै दाँत र मुखमा पीडा धेरै हुनेछ । पेट दुखाइ, हड्डी र नसाको समस्या वर्षभरी रहनेछ ।
कुम्भ(गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) ग्रहगोचर वर्षको धेरै समय प्रतिकूल रहनेछ । वर्षारम्भमा आद्य साढेसाती, द्वितीय र एकादशेश गुरु राशिमा केन्द्रादि दोष लिएर बस्ने हुनाले मानसिक तनाव प्रसस्त मात्रामा बढ्नेछ । चतुर्थ राहुले घरेलु समस्या बढाउने, मित्रहरूले धोका दिने, सवारी साधनमा समस्या आउने योग छ । बाह्रौँ शनिले सञ्चित धनको नाश हुनेछ। अनावश्यक विवादले मानसिक सन्तुलन कायम राख्न गाह्रो पर्न सक्छ । अरूबाट तीव्र आलोचना हुने, धनमाल हराउने सम्भावना छ । उपलब्धिहीन कार्यमा समय खर्च हुनेछ । दाजुभाइ र सहयोगीहरूको सहयोग प्राप्त भए पनि आफ्नै गलत विचारका कारण लाभ उठाउन सकिने छैन । दाँत र मुखमा पीडा हुने, उच्च रक्तचापले गर्दा मुटुमस्तिष्कमा पीडा बढ्न सक्छ । हड्डी र नसामा समस्या आउने सक्ने योग पनि छ । सन्तानसँग विमति नरहने, पढाइमा सफलता मिल्ने योग छ । आश्विन १४ देखि कार्तिक २३ गतेसम्मको समय अनुकूल रहने हुँदा धन प्रशस्त कमाउन सकिनेछ । बोलीको प्रभावले अरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने अवसर मिल्नेछ । उच्च मनोबल र नयाँ जोशका साथ अघि बढ्दा पुराना समस्या सुल्झाउन, नयाँ कामहरू सुरु गर्न सहज हुनेछ ।
मीन(दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) समग्रमा ग्रहगोचर अनुकूल रहे पनि तृतीय राहुको अनुकूल प्रभावले पराक्रम वृद्धि हुने, अधुरा काम बन्ने, नयाँकामको अवसर मिल्ने योग छ । बाह्रौँ बृहस्पतिको प्रतिकूलताले खर्च विवाद बढ्ने, तीब्र तनावको सामना गर्नुपर्ला । वर्षारम्भमा एकादश भावमा रहेको शनि अनुकूलताले प्रशस्त आय आर्जन गर्न सकिनेछ । तपाईको सत्यतालाई सबैले स्वीकार्ने र साथ दिँदै सफल हुन सहयोग गर्ने योग छ । शरीर स्फूर्तिलो हुनाले महत्वपूर्ण कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सकिनेछ । नयाँ मित्रहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्ने अवसर मिल्नेछन् । सहयोगीहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट राम्रो सहयोग नपाइने हुँदा काम गर्दा आफैँले प्रयत्न गर्नुपर्ला । न्यायिक, वैज्ञानिक र साहित्यिक क्षेत्रमा अवरोध आउने भएकोले सचेत रहनुपर्ने छ । सन्तानबाट सहयोग पाउने सम्भावना अत्यन्त कम रहनेछ । वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक शैक्षिक,छात्रवृत्ति र कूटनैतिक कार्यमा रहेकाहरूलाई यो वर्ष ग्रहले पूर्ण साथ नदिने भएकोले संयम र सजग भएर काम गर्नु उचितहोला । नयाँप्रेमको प्रस्तावले पुराना प्रेमलाई गतिरोध तथा विनाप्रेमहरूको पनि वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने योगमा पनि संकट आउन सक्छ । धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा सफलताको साथै सम्मान पाउने योग छ । नोकरीमा संकट आउनाले स्थानान्तरण र झुट्टा आरोप लाग्न सक्ने बलियो सम्भावना छ ।